Xaalada ajaaniib ku go'doomay degaanada Somaliland oo laga deyriyey
By WARIYAHA NEW DEHLI , GAROWE ONLINE
Kalluumeysatadaan reer Hindiya ayaa wajahaya cunto la'aan, iyagoo codsanaya in waddankooda lagu celiyo.
NEW DEHLI, India – Xaalada sideed kalluumeysato oo kasoo jeeda ismaamulka Tamil Nadu ee Hindiya kuna go'doonsan magaalada Berbera ee Somaliland ayaa liidata, waxayna rabaan in dalkooda lagu celiyo.
Sidda uu wariyey mareegga Hindu Tamil, muruq-maalatadaan waxay kala yihiin; Chithravel 27-jir, Viswanathan 47-jir, wiilkiisa Cheran 22-jir, Muthukrishnan 28-jir, Manimaran 34-jir, Prabhu 27-jir iyo Suresh oo 35-jir.
Dhibaatooyinka haysta ayaa la sheegay in ay kamid yihiin cunto iyo hoy la'aan isla markaana ay la daalaadhacayaa xaalado ka dhashay Coronavirus.
Dhaqdhaqaaqa u dooda xuquuqda kalluumeystada Tamil Nadu oo dowladda dhexe ee Hindiya waydiistay in ay soo badbaadiso xirfad-layaashaas ayaa tilmaamay in ay Somaliland ku tageen qandaraas ay la galeen shirkad.
Inkasta oo warbixinta bogga aan lagu soo bandhigin magaca shirkadaas ka shaqeysa arrimaha kalluumeysiga, haddana waxaa la wariyey in heshiisku dhacay 25-ka bishii October sanadkii aynu kasoo gudubnay ee 2019.
Deeran Thirumurugan, oo ah qareen u doodaya shaqsiyaadkaas, ayaa sheegay in shaqooyinkooda uu curyaamiyey safmarka Coronavirus.
"Waxay codsanayaa in la badbaadiyo maadaama aysan cunto haysan, waxay doonayaa in ay guriyooda kusoo laabtaan," ayuu raaciyey.
Warbixinta uu daabacay Hindu Tamil ayaa intaas ku dartay in safaaradda Hindiya ee Muqdisho ay riixeyso dedaalada dib u celinta shaqaalahaan.
Ma jiro wax war ah oo ku saabsan dhacdadaan oo illaa iyo haatan kasoo baxay maamulka gooni u goosadka ah ee fadhigiisu yahay Hargeysa.
Kalluumeysiga ayaa wuxuu yahay fursadaha shaqo ee ka jira gudaha Soomaaliya, balse shirkadaha maalgeliya waxay uga faa'iideeyaan ajaaniibta xilli ay muwaadiniinta waddanka ee shaqo la'aanta ah ay aad u sareyso.
Coronavirus oo baajiyey dhoolatus ciidan oo lagu casuumay Soomaaliya
Soomaliya 03.03.2020. 18:45
Dib-u-dhigista carbiska milatari ayaa lagu sheegay in la qaatay kadib wadahadalo saacado badan qaatay.
Hindiya: Gabar yar ayna nolosha ku aaseen waalidiinteeda oo la halay
Caalamka 14.10.2019. 23:01
Dhakhtar HIV qaadsiiyay dad gaaraya 33 qof
Caalamka 08.02.2018. 18:44
India oo laga codsaday in ay laasho baarista wariye ka waramay Covid19
Caalamka 19.06.2020. 17:00
Xiisad cusub oo ka dhex-qaraxdey dalalka Pakistan iyo Hindiya
Caalamka 01.06.2020. 15:20
DF oo ka banaanbaxdey xiriirka ay Taiwan la sameysatay Somaliland
Soomaliya 18.08.2020. 17:05